November 18, 2016 | 8:16 pm
सर्लाहीको बाग्मती ब्यारेजनिर भुइँचालोले अग्लिएको जमिन। यही ठाउँको जमिन उत्खनन गरेर सन् १२५५ को भुइँचालोले अग्लिएको पत्ता लागेको हो।
यो नयाँ अनुसन्धानमा केही विवादित विषय पनि छन्।
सर्लाहीको बाग्मती ब्यारेजनिर भुइँचालोले अग्लिएको जमिनमाथि तीन भूगर्भ वैज्ञानिक।
यसले १२५५ को भुइँचालो दरार बाग्मती ब्यारेज नाघेर पूर्व गएन भन्छ। जबकि, सापकोटा र ट्यापोनियरले शिर खेला किनारको जुन ढिस्कोमा १९३४ को दरार फेला पारेका थिए, त्योभन्दा केही मिटर तल १२५५ को दरार पनि फेला परेको ठोकुवा गरेका छन्।
यी दुवै निष्कर्ष वैज्ञानिक खोजमै आधारित छन्, तर यिनमा विरोधाभाष छ।
शिर खोला दरारमा १९३४ को तथ्यांक प्रस्ट देखिन्छ, तर १२५५ प्रस्ट नभएको चाम्लागाइँ दाबी गर्छन्। उनका अनुसार, जुन दरारलाई १२५५ को भनियो, त्यहाँको कार्बनडेटिङ नतिजा ६४४ देखि १२१० बीचमा थियो।
‘यो कसरी १२५५ हुनसक्छ?’ उनले भने, ‘बरु ११०० पो हुनुपर्ने हो!’
उनले भनेजस्तो शिर खोलाको त्यो दरार १२५५ को सट्टा ११०० को हो भने पछिल्लो नतिजासँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। होइन भने, यी दुईमध्ये कुनै एउटामा त त्रुटि अवश्य छ। तर, कुनमा?
‘हाम्रो शोधपत्रपछि अब अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानलाई नयाँ ढंगले हेरिनुपर्छ,’ चाम्लागाइँले भने।
भूगर्भ वैज्ञानिक सोम सापकोटा भने आफ्नो निष्कर्षलाई नै सही दाबी गर्छन्। ऐतिहासिक भुइँचालोको पृष्ठभूमि केलाउँदा कार्बनडेटिङलाई मात्र आधार मान्नु नै गलत भएको उनको भनाइ छ।
‘उहाँहरूले जमिन उत्खननबाट निस्केको कार्बनडेटिङ तथ्यांक मात्र हेर्नुभयो, जबकि ऐतिहासिक भुइँचालोको पृष्ठभूमि केलाउँदा वरिपरि सम्पूर्ण भूगोल अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सापकोटाले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले कार्बनडेटिङलाई मात्र आधार मानेका छैनौं, खोला छेउछाउ भुइँचालोले अग्लाएको टारको आयु पनि हेरेका छौं।’
चाम्लागाइँसँग आफ्नो नतिजा पुष्टि गर्ने अर्को तर्क पनि छ।
उनको भनाइमा, सन् ११०० को भुइँचालो ८.८ म्याग्निच्युडको हो। यति ठूलो भुइँजालो जाँदा जमिन लगभग १० मिटर सर्छ। दस मिटर जमिन सर्न ५०० वर्ष लाग्छ भन्नेमा सबै भूगर्भविद् सहमत छन्। ‘११०० र १२५५ को दरार यति नजिकै फेला पर्न १५० वर्षमै जमिन १० मिटर सर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘यो सम्भव छैन।’
डेढ सय वर्ष अन्तरालमा यति ठूलो भुइँचालो जान सक्दैन भन्ने तर्कसँग सापकोटाको पनि सहमति छ। तर, उनी यसमा दुइटा सम्भावना देखाउँछन्।
पहिलो सम्भावना, मरहा खोलाको जुन दरारलाई ११०० को भनियो, त्यो आफैंमा १२५५ को हुनसक्छ। ‘कार्बनडेटिङ तथ्यांकलाई केही प्रतिशत ‘प्लस–माइनस’ गरेर हेर्नुपर्छ, त्यसलाई ऐतिहासिक भुइँचालोसँग दाँज्नुपर्छ,’ उनले भने।
‘१२५५ मा ठूलो भुइँचालो गएको थियो भन्ने हामीसँग प्रस्ट ऐतिहासिक अभिलेख छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्योभन्दा जम्मा डेढ सय वर्षअघिको किन छैन?’
दोस्रो सम्भावना, मरहा खोला र शिर खोला आसपासका क्षेत्र यी दुवै भुइँचालो दरारको ‘मिलन–विन्दु’ हुनसक्छ।
‘उहाँहरू ११०० को भुइँचालो पूर्व फैलियो, १२५५ को पश्चिम फैलियो भन्नुहुन्छ, त्यसो हो भने पनि बर्दिबास आसपासको क्षेत्र यी दुवै भुइँचालो दरारको मिलन–विन्दु किन हुन सक्दैन?’ सापकोटाले भने, ‘११०० को दरार यहाँबाट सुरु भएर पूर्व फैलिएको र १२५५ को दरार पश्चिमबाट फैलिँदै यहाँ आएर अन्त्य भएको पनि हुनसक्छ।’
‘१२५५ भुइँचालोको ठ्याक्कै केन्द्रविन्दु थाहा नहुनुले नै यस्तो बहस निम्त्याएको हो,’ उनले भने।
भुइँचालो अध्ययनसँग जोडिएका यी विवाद आफ्ना ठाउँमा छन्, तर एउटा कुरामा दुवैको सहमति छ– नेपालमा ठूलो भुइँचालोको जोखिम टरेको छैन।
बाग्मती ब्यारेजको दरार हेर्न जाँदा अमेरिकी भूगर्भ वैज्ञानिक स्टिभ (स्टेभन वेस्नोस्की) ले भनेका थिए, ‘भुइँचालोसँग जोडिएका चार प्रश्न छन्– भुइँचालो कसरी जान्छ? कहाँ जान्छ? कति ठूलो जान्छ? र, कहिले जान्छ?’
अघिल्ला तीन प्रश्नको जवाफ विज्ञानसँग छ। एउटै प्रश्नको जवाफ भूगर्भ विज्ञानले दिन सकेको छैन, त्यो हो– भुइँचालो कहिले जान्छ?
‘हाम्रो सारा प्रयास नै यही आँकलन गर्नु हो, ताकि भुइँचालो जानुभन्दा अगाडि नै मानव जीवन सुरक्षित पार्न सकियोस्,’ स्टिभले भने।
‘मध्य–नेपालमा फेरि ठूलो भुइँचालो जाने खतरा चाहिँ पक्का हो त?’ मैले उनलाई सोधेँ।
‘म नेपालमा बसेँ भने गत वर्षको गोरखा भुइँचालोभन्दा ठूलोका लागि तयार रहन्छु,’ उनले जवाफ दिए, ‘कुरा यत्ति हो, त्यो कहिले आउँछ थाहा छैन। आज आउनसक्छ, भोलि आउनसक्छ, वा मेरो जिन्दगीमै कहिल्यै नआउन पनि सक्छ।’
‘तर, म प्रार्थना गर्छु, त्यो भुइँचालो आउँदा म नेपालमा नहोऊँ!’सेतोपार्टीबाट साभार